Ukufudumala kwe-IP: Yakha Idumela Lakho Elisha Ngalesi Sicelo Sokufudumala se-IP | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 25, i-2020 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 25, i-2020 Douglas Karr
Uma unesisekelo esikhulu sosibhalisile futhi kudingeke ukuthi uthuthele kumhlinzeki wesevisi we-imeyili omusha (i-ESP), kungenzeka ukuthi ubudlule ebuhlungwini bokwengeza idumela lakho elisha. Noma okubi kakhulu ... awuzange uyilungiselele futhi ngaso leso sikhathi wazithola usenkingeni ngenye yezinkinga ezimbalwa:
Umhlinzeki wakho omusha we-imeyili uthole isikhalazo futhi wakuvimbela khona manjalo ekuthumeleni i-imeyili eyengeziwe uze uxazulule inkinga.
Umhlinzeki Wensizakalo Ye-inthanethi noma insizakalo yokuqapha idumela ayiliboni ikheli lakho le-IP futhi ivimba umkhankaso wakho wenqwaba.
Umhlinzeki Wensizakalo ye-Inthanethi akanalo idumela lekheli lakho elisha le-IP futhi ahambisa yonke i-imeyili yakho eya kufolda engenamsoco.
Ukuqala ngonyawo lwesokudla ngo Ukufudumala kwe-IP Isu libaluleke kakhulu lapho uthuthela kumhlinzeki wesevisi we-imeyili omusha. Abahlinzeki Bensizakalo ye-imeyili abaningi abenzi isivumelwano esikhulu kakhulu ngayo… bavele bakukhumbuze ukufudumeza ikheli lakho le-IP elisha. Ngemiphumela ephakeme, noma kunjalo, akuwona umsebenzi olula:
Awufuni ukuzibeka engcupheni ekuthumeleni kwakho kokuqala, ngakho-ke ukwehlukanisa isisekelo sababhalisile bakho kubabhalisi bakho ababandakanyeke kakhulu kubalulekile. Uma othile engakaze avule noma achofoze i-imeyili ezinyangeni… mhlawumbe awufuni ukuba nabo kumikhankaso yakho yokufudumala ye-IP.
Cishe yonke imininingo egciniwe yababhalisile inamakheli amabi e-imeyili namakheli e-imeyli ogaxekile abangakaze basuse noma bahlanze. Ngaphambi kokuthumela umkhankaso we-IP Warming, ufuna ukukhipha lawa makheli e-imeyili kudathabheyisi yakho.
Yonke i-ISP inevolumu elungiselelwe yamakheli e-imeyili ozoqala ngawo ukwakha idumela ngokuhamba kwesikhathi nawo. Isibonelo, iGoogle ifuna ukuthi uthumele inani elincane ekuqaleni, bese ukhulisa inani ngokuhamba kwesikhathi. Ngenxa yalokho, udinga ukuhlukanisa ngokucophelela futhi uhlele imikhankaso yakho.
Ngemuva kokuklama nokuthuthukisa amasu we-IP Warming aphumelelayo wamakhulu amaklayenti, mina nozakwethu Highbridge sithathe isinqumo sokwenza insiza yethu ngonyaka odlule ukwenza inqubo ibe lula. Izici ze-IP Warm zifaka:
Ukuhlanza - Ukuhlanzwa kwangaphambili kwedatha yababhalisile ukunciphisa ama-bounces, amakheli we-imeyili wesikhashana, nezicupho zogaxekile. Siyawacindezela la marekhodi emikhankasweni ethuthukile bese sibuyisela idatha kuwe ukuze uvuselele amarekhodi akho omthombo.
Ukuqala kuqala - Sibeka phambili ababhalisile ngokususelwa ekuzibandakanyeni kwabo nenkampani ukuqinisekisa ukuthi ababhalisile abasebenza kakhulu bathunyelwa imikhankaso yokufudumala ye-IP kuqala.
Ubunhloli Besizinda - Izincomo eziningi zokufudumala kwe-IP zimane zikutshele ukuthi uhlaziye i-imeyili yakho nge-ISP; noma kunjalo, lokho akulula njengokuhlola isizinda sekheli le-imeyili. Empeleni sixazulula isizinda futhi sinobuhlakani ukuthi iyiphi insizakalo abayisebenzisayo ukukhulisa imikhankaso. Lokhu kubalulekile ngezinkampani ze-B2B ezithumela ngokuyinhloko kwizizinda zebhizinisi hhayi ama-imeyili abathengi ajwayelekile.
Luhlelo - Sibuyisa uhlu lomkhankaso kanye nohlelo lokuthumela olunconyiwe kuwe ukuze ukwazi ukungenisa kalula uhlu bese uhlela okuthunyelwayo. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuklama umkhankaso bese uhlela okuthunyelwe!
Ngabe Uthuthela Ekhelini Le-IP Elabiwe nge-ESP Yakho Entsha?
Noma ngabe ungumthengisi omncane we-imeyili othuthela kukheli le-IP elabiwe noMhlinzeki Wensizakalo We-imeyili omusha, ukulungiswa nokukhankasela umkhankaso esikwenzela kona kuzokugcina ungangeni enkingeni.
I-IP Warm Roadmap
Sisebenzela ukukhulisa ipulatifomu ngokuqhubekayo ngezixhumi zedatha futhi sithumela okuhleliwe nge-API ukuze izinkampani zenze okuncane. Okwamanje, kuyinsizakalo yangemuva kokugcina - kepha sisebenza ngokuqinile ekugcineni nangaphambili kwalokhu kuthuthukiswa.
Uma ulungiselela ukuthuthela kumhlinzeki wesevisi we-imeyili omusha, manje yisikhathi esihle sokusebenzisa ipulatifomu njengoba sisekela ngokwengeziwe futhi sisebenzelana kakhulu namakhasimende ethu!
Qalisa nge-IP Warm
Ukudalulwa: Nginguzakwethu ku- IP Warm.
Tags: abazinikezele ipukukhishwa kwe-imeyiliidumela le-imeyiliumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliespip idip efudumeleip ukufudumala lokusebenzaisevisi yokufudumala kwe-ipkwabelwane ip